Shabakadda Wararka Amiirnuur – Page 3 – Xog Xaqiiqda Ku Saleysan
Sawirro : Meydadka Askartii Amisom laga laayay oo Uganda laga dejiyay.
Waxaa Garoonka diyaaradaha magaalada Entebbe ee dalka Uganda laga dejiyay meydadka Askartii misom looga laayay dagaalkii cuslaa ee maalmo kahor ka dhacay magaalada Muqdisho. Toboneeyo Meydad ahoo Naxashyo ku jiray ayaa laga dejiyay Garoonka, iyadoona halkaas lagu qabtay Munaasabad baroor diiq ah oo dad badani ay kasoo qeyb galeen.
Sheekh Dirir : “Gumeystaha meeshuu Owr marinayo Irbad buu ku dayaa”!
Sheekh Maxamed Dirir oo ka mid ah Culimada Soomaaliyeed ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay Kaniisadda maalma kahor laga furay magaaladaasi. Sheekhu waxa uu tilmaamay inaysan Sharciyan bannaaneyn in dhulka Muslimiinta laga furo Kaniisado ay Nasaarado leeyihiin, isagoona sheegay in arrintaasi ay keeni karto in dadka Muslimiinta looga fitneeyo […]
Shaahlaha Wareega Ee Hargeysa!. [ Video ]
Wiil dhallinyaro ah oo ka yimid Qurbaha kuna nool magaalada Hargeysa ayaa hal abuuray shaqo si weyn usoo jiidatay dadka ku nool magaaladaas.
Cali Nuur : ” Amisom waxay mareysaa in intaas oo Askari uga dhintaan si ay Cunto iyo Biyo ugu geeyaan Ciidamadooda”. [DHAGEYSO]
Gudoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeellaha hoose ee Dowladda Fedraalka Cali Nuur Maxamed ayaa ka hadlay weerarkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyay Ciidamada Amisom ee shalay ka dhacay duleedka degmada Buulo mareer. Wuxuu tilmaamay in tobonaan ka tirsan Ciidamada Amisom, gaar ahaan kuwa ka socda Dowladda Uganda in lagu dilay weerarkaasi. Xarakada […]
Sheekh Cali dheere : ” Tobon Sano oo kale hadaad sii joogtaan dagaalku waa soconayaa”.
Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa si faahfaahsan kaga hadlay dagaalka maanta ka dhacay gobalka Shabeelada hoose. Afhayeenka guud ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa carabaabay in ciidamada Mujaahidiinta ay dul istaageen meydadka 39 sagaal oo ah askarta shisheeyaha ee maanta lagu xasuuqay […]
Weerar Khasaare lagu gaarsiiyay Ciidamada Amisom oo ka dhacay duleedka Buulo-Mareer.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Gol-weyn ee duleedka deegaanka Buulo mareer ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa waxay sheegayaan in barqanimadii maanta uu halkaas ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeya Ciidamada Amisom iyo kuwa Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Xoogagga Alshabaab ayaa Waddada u galay kolonyo ay la socdeen Ciidamada Amisom, iyadoona […]
Mariane : “Dowladda ayaa xaqiiqsatay in dib u furidda Kaniisadda ay muhiim u tahay Dowladnimadooda” . – Video
Mariane Veccachione oo ah haweeney kasoo jeeda mid ka mid ah Waddamada Yurub oo horraantii sanadkan ka qeyb qaadatay dib u furidda Kaniisad horey ugu taallay magaalada Hargeysa balse dayactir lagu sameeyay ayaa sheegtay in Maamulka Somaliland uu gacan weyn ka geystay furitaanka Kaniisadda. Iyadoo ka hadleysay munaasabad lagu qabtay […]
Pakistan : Urur Jihaadi ah oo looga dhawaaqay Gobolka Kishmiir.
Gobolka Kishmiir ee ay leedahay dowladda Pakistan, balse qeyb ka mid ah ay xoog ku heysato dowladda India waxaa looga dhawaaqay Urur Jihaadi ah oo hubeysan. Koox magaceeda ku sheegtay ” Ansaaru Ghazawatul Hind” ayaa baraha internetka ku faafisay bayaan ay ku sheegeyso inay tahay Jamaaco Jihaadi ah oo ka […]
Qaraxa ka dhacay meel ku dhow Saldhigga Ciidamada Jabuuti ee degmada Jalalqsi.
Ciidamado ka tirsan Dowladda Jabuuti ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa qarax lagula eegtay gudaha degmadaasi. Qaraxan oo dhacay gelinkii dambe ee maalintii shalay ayaa waxaa laga maqlay afaafka hore ee Saldhig ay leeyihiin Ciidamada Jabuuti ee ku sugan degmada Jalalaqsi. Lama oga khasaaraha […]
14 maalmood kadib oo lagu tukaday Masjidka Al-Aqsa. (Sawirro)
Markii ugu horreysay 14 maalmood kadib waxaa shalay Kumanaan Muslimiin ah ay ku tukadeen Masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee kuyaalla magaalada Al-Qudus ee Caasimadda Filastiiyiin. Tani waxay ka dambeysay kadib markii maalintii Khamiistii ee todobaadkii lasoo dhaafay uu Maamulka Gumeysiga ee Yahuudda uu Masjidka ka saaray Qalabka birta ah ee […]